Muuri News Network » Xalka Soomaaliya ma wuxuu ku koobanyahay Gobollo gaar ah.
Xalka Soomaaliya ma wuxuu ku koobanyahay Gobollo gaar ah.
Dec 16, 2015 - Comments off
Dalka Soomaaliya wuxuu soo maray dhibaatooyin badan oo isugu jira burbur, dagaal sokeeye iyo kooxo diimeed wata mab’da u gooni ah sida; midowga maxaakiimta islaamiga, alshabaab, IWM. Dhibaatooyinkaas waxay soomaaliya ku reebeeb saameyn badan oo isugu jira barakac, abaaro, tahriib, dhaqaala xumo IWM.
Dagaalka sokeeye wuxuu ka qarxay meelo badan oo kamid ah gobollada soomaliya guud ahaan; dagaalada oo u dhaxeeyay qabaa’ilka oodwadaagta ah waxaana sabab u ahaa dagaaladaas xoolo layska dhaco, beer lasyka daaqo, iyo xukun deegaan oo laysku qabsado sida beelaha galgaduud ka soo duulay ay ugu qabsadeen dadka reer Dhabeelaha hoose.
Dalka soomaaliya masoo marin ilaa waqti xaadirkan dowlad cadaalad ah oo loo wada dhanyahay shacabkuna kuwada qanacsanyihiin. Markuu bilowday dhaqangelinta nidaamkii dowladnimo ee lagu heshiiyay sanadkii 2004 laguna soo doortay dowladdii uu hogaaminayay madaxweeyne Cabdullahi Yusuf Axmed ee ahaa federalismka oo micnihiisu yahay baahinta awoodda dowladnimo laga soo bilaabo dowladda dhexe ilaa heer gobol, degmo iyo tuulo isla markaana aas aaskiisu yahay iskuxun dadweeynaha ama shacbwalbaba inuu xukumo deegaankiisa.
Dowladahii saldhigoodu ahaa ku dhaqanka cadaalad darrada iyo kala sareysiinta shacabka waxaa ka mid ah dowladda hadda jirta ee uu madaxweeynaha ka yahay xassan sheikh maxamuud oo caada ka dhigtay in uu u eexdo xigaalkiisa kana eexdo dadka kale ee aan xigaalkiisa ahayn ama ku qabiika ahayn; waxaa tusaale cad kaaga filan eexda iyo kala fadilidda uu ku sameeyay gobolladda iyo qabiilada kale ee kala duwan; sida loo dhisay maamul goboleedka GALMUDUG iyo sida loo dhisay maamul goboleedka KOONFUR GALBEED, qofkasta oo soomali ah lana socday dhismaha maamul goboleedyadaas waa uu dareemi karaa sida uu Xasan sheikh udhisay kan ku qabiilka ah iyo midka qabaa’ilka kale ah.
Markaan dhanka kale ka eegno tusaale ahaan gobollada dalka soomaaliya waxa uu si aan xishood lahayn ugu kala eexday gobolladaas; tusaale ahaan shabellada hoose iyo shabellada shexe. Shabellada hoose waxa uu u soo magacaabaa had iyo jeerba dad aan u dhalan deegaanadaas isla markaana uu curyaamiyaa koboca dhaqaale ee gobolka Sida uu ugu fiirsanayo ciidanka militeriga ee qaabilka kudhisan deegaanadaas oo u diiday shacabka gobolkaas in ay caruurtooda aadaan goobaha waxbarashada iyo in uu fido baaxadda ganacsigooda iyo degenaashaha kajira gobolka shabeelaha shexe. Waa qabyaalad cad oo uu xasan Sheekh ku dhaqmay taariikhduna ay xusi doonto.
Dhamaadkii bishaa 11add markuu ka qarxay gobolka Mudug dagaal u dhexeeyay qabaa’il ka kala tirsan Galmudud iyo Puntland waxaa durbadiiba u kacay dhamaan madaxda soomaaliyeed min heer qaran ilaa heer gobol iyadoo waliba beesha caalamka kaalin ween ka qaadaatay, maxaa diiday in sidaas oo kale loogu gurmado xal deg degna laga gaaro dagaalada garabka og lagu hayo shacbka beesha biimaal ee ku nool gobolka shabeellaha hoose misa xalka soomaaliya waxa uu ku jiraaa gobollo gaar ah.
Dhamaan dhibaatoooyinka aan kor ku soo sheeegnay waxaa had iyo jeerba lagu hayaa deeganada beesha biimaal ee gobolka shabeelaha hoose iyadoo dowladda xassan sheikh in ay sii huriso ama sii laba jibaarto mooyee aan marnaba isku dayin in ay xal u raadiso; taasi bedelkeeda waxa ay sababtay in ay midoobaan shacabka biimaal ee deeganadaas isla markaana ay siyaado awoodooda dhaqaale, siyaasad iyo waliba ciidan ahaan. Waxaan maqaalkeyga ku soo gebagabeynaya in beesha biimaal isku duubnaadaan marna ay ka quusan raadinta nabad waarta oo ay ku diirsadaan dadkooda, dowladna ay waxba ka sugin.
Macalinkeyga isoo baray siyaasadda ayaan kula dooday mar uu inoo sharaxayay in uu dagaalka keeno xal, aqoonsasho iyo midnimo anigoo ka diiday arintaas lkn manta waxaan ogaaday in uu u keenay beesha biimaal intaas iyo in kabadan. Xalka marwalba wuu danbeeyaa dhibaatada ayaa soo horumarta marna ha quusanina oo guushu weydhawdahay; beentuna lugo malahan oo beenta loogu soo sheekeyay dhalinyarada lasoo qalday ee meydkooda lagaga cararay goobta dagaalka dhamaadkeeda ayaa lataaganyahay.
Ahmed Ali Gacal